Fitaovana miloko manan-danja 6 ho an'ny Mpamorona | Famoronana an-tserasera
Fitaovana miloko manan-danja 6 ho an'ny mpamorona
Jorge Neira | | Palety miloko
Tsy vaovao amin'ny olona izany fa izy daroka baomba, sora-baventy, ety ivelany, pop-up ary karazana dokam-barotra isan-karazany, mampitombo hatrany ny fifaninanana eo amin'ny orinasa ary vokatr'izany, ny asan'ny mpamorona, izay omena vola hamoronana sanganasa mahasarika sy hisarika ny sain'ny mpanjifa.
Inona no mendrika manasongadina ny loko, lafiny iray manan-kery rehefa misafidy, ary koa ny fisafidianana endrika, marika, typografika. Izany hoe, tsy maninona ny tetikasa, ny loko mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fandikan'ny olona ny asanao.
Saingy azoko lazaina fa somary mitombina ny lokony, satria ny loko iray ihany dia mety hipoitra karazana sy fihetsika samy hafa amin'ny olona samihafa, indraindray noho ny safidin'ny tena manokana, indraindray noho ny fiaviana ara-kolotsaina.
Betsaka ny fitaovana an-tserasera amin'ny Internet ka indraindray tsy fantatsika izay hampiasana, sa tsy izany?
Nisaraka àry aho sokajy fitaovana miloko izay hitako fa tena ilaina sy miasa (paleta, Safidy teôria loko, CSS).
1 Fitaovana miloko: Paleta loko
1.2 ny bala
2 Fitaovana safidy loko
2.2 Anaran'ny loko CSS
3 Fitaovana teoria miloko
3.1 Mpamolavola teti-doko
Fitaovana miloko: Paleta loko
Raha manomboka famolavolana avy hatrany ianao, tsy misy aingam-panahy na tsy misy fanitsiana hanaraka, dia mety ho sarotra be izany amboary ny loko miloko izay miasa. Izany no antony anoloranay hevitra fitaovana sasany izay hanampy anao hamaritra loko tsara ho an'ny asanao.
ColourLover no misy ny trano paleta miloko an-tapitrisany novokarin'ny mpampiasa. Mikaroha ny famoriam-bola dia ho hitanao ilay manome aingam-panahy anao na mitady loko ary misafidy izay azonao atao fitambarana efa noforonina mialoha.
Kuler dia a fitaovana Adobe matanjaka izay ahafahanao mijery sy manome isa ireo loko efa tafasaraka amin'ny lohahevitra, ankoatry ny famelana anao hamorona paleta anao manokana amin'ny fikororohana.
Mitady fihetseham-po, fomba na atmosfera manokana amin'ny paleta milokoo? Avy eo ity tranonkala ity dia ho anao, nanomboka Fitaovana marani-tsaina ny sary izay mamela ny safidin'ny loko misy sary nakarina tao amin'ilay tranonkala ihany.
Fitaovana safidy loko
Tsotra ity fitaovana ity, saingy mahasoa ary antsoina hoe Colordot, fitaovana iray izay mamela anao scan ny fikandrana fitetezana miaraka amin'ny loko tonga lafatra ary avy eo kopia ny kaody hex amin'ny tsindry tokana.
Anaran'ny loko CSS
Raha tsy tena tianao ny anaran'ny loko miloko, angamba ity lisitra 147 ity anarana loko azo faritana mety ho somary mora tadidy kokoa. Azonao atao ny mijery ny safidinao iray manontolo na mahita loko miloko amin'ny tsindry totozy.
Fitaovana teoria miloko
Tadidinao ny loko kodiarana, ny analogies, ny triassic ary ny loko mifameno amin'ny sokajy zavakanto? Azonao atao ny mampihatra ny teôria amin'ny alalan'ireo fitaovana miloko voaporofo ara-tsiansa.
Ny famolavolana ny volavolanao manokana dia azo atao, mila mihodina fotsiny ianao ary manamboatra ny kodiarana loko mifantina loko fototraHo hitanao avy eo ny sanda izay vokarina ho azy mifototra amin'ny karazana paleta anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Palety miloko » Fitaovana miloko manan-danja 6 ho an'ny mpamorona
Volavola ho an'ny tsena ary amidio amin'ny sanda
Ahoana no famolavolana anao? Amin'ny tanana sa amin'ny masinina?